Faalo:- Booqashadii Xingalool iyo Aragtidaydii Jidka U Dhexeeyay Badhan iyo Xiingalool “Waxbadan kabaro” | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Abbaaro 05:30 Subaxnimo oo maalin Sabtiya ah kuna suntanayd 30tii November 2019ka ayaannu ka baxnay magaalada Badhan annaga oo u jeedna degmada Xiingalool, oo ka tirsan Gobolka Sanaag ee Maakhir -Soomaalia. Waddada Airpork ayaanu raacnay ee Bari ka xigta Badhan waxaanu bilownay safar socodkiisu dhexdhexaad yahay gaadiidka, moodharada aanu saaranahay waa kuwa loo yaqaano Layla Calwa Land Cruzer dhulka aanu maraynaa waa Dedib ilaa aanu dhaafnay illaha oo aanu u gudubnay Soolka Mamac ah. Dhulkaaba u qaybsanaa Didib iyo Mamac Gebi iyo Sool.
Waxa aanu sii marnay Bohosha Gebi, Habar Hunbul Dhanaha iyo Jincayo annaga oo u gudubnay deegaanka Ceel Buh [Ceel Khayr]. Halkaa waxa aanu kula kulannay Odayaal, dhalinyaro, Haween iyo aqoonyahan qaybaha kala duwan ee bulshada Degmada goorsheegtu waxay madax la sii gelaysay 7:00 subaxnimo. Indha furka quraacda ayadaa noo bartilmaameedku ahaa Quraacda iyo is warsashada Bulshada Degmada, Inta aanu ka soo degnay moodharadii aanu la soconay ayaannu dhulka fadhiisanay meel la noo sii agaasimay oo gasiin quraaceed lagu sii diyaarshay markii aanu quraacanay ka dib waxa aanu war, weydiimo iyo xogo wixii loo baahdaba is dhaafsanay bulshadii Degmada Ceel Buh ‘’ Ceel Khayr’’.
Waa dhaqaajinay oo mar kale ayaanu safarkii sii wadanay maadaaba uu qasdigayagu ku waajahanyahay Degmada Xiingalool oo noo jirta masaafo qiyaastii ah 80 KM, waxa aannu ka gudbnay dhul badan annaga oo sii marnay deegaannada Qoyan iyo jiingada. Wadaha gaadhiga waxa uu ka mid ahaa isla waftiga sababtoo ah u jeedkaygu waxa uu ahaa inaanu ilaashano xogaha safarkayga la xidhiida. Sidoo kale waxa uu ahaa Nin dad aqoon ah oo dal-mareen waxa kale oo gaadhiga nala saarnaa oday masuul ah oo dal aqoona kuna xeel dheer deegaanada aanu maraynay waxa uuu noo sheegay inuu yaraantiis geela ku raaci jiray dhulkan dalsanka ah ee mamac iyo didibka u kala qaybsan kolba waxa uu noo sheegaa tog ama jeex dhul daaqsin leh oo doog doomaar iyo dixiba allah ku manaystay in kastoo cawsku yara cadaa waayadii uu geela ku raaci jiray. Anniga barasho iyo casharo hor leh oo deegaankayga ku saabsan ayaan korardhsanayey.
Dhir ay waayo waayo iigu dambaysay ayaan indhaha la raac raacayey dhulku sool iyo saanaagba wuu ahaa, waxaa kale oo uu kolba u sii kala qaybsamayey deegaanku mamac iyo didib gebi iyo Oogo. Deegaankuna waxa uu ahaa mid roobabkii Guga maansheeyeen in kastoo dayrtu ku yarayd meelaha qaarkood oo ay teel teel ahay waxaan xasuustay waayo tegay oo aan aad u xasuustay waa aan safari ku tegay joogayna Banka Tuunyo ee xuduudka Ethopia afka ku haya. Safarka waxaanu ku weheshanaynay sheekooyin taariikhda baalal dahaba kaga jira Hogaamintii Maxamuud Cali shire, Dhahar iyo tii Sayid Maxamed Abdallah Xassan.
Hareeraha waddooyinka aanu maraynno waxa ku hareeraysnaa xoolo kala geddisan oo geel iyo adhi ah wallow idihii Xadeedka lagu sheegi jiray ay yaraayeen taasna sababtedda ay u yaradeen ay tahay abaarihii iskaga daba yimi deegaanada xadeedka. Dhirta mankeeda ayaa ay indhuhu ku doogsanayeen. Doogga ayaa ahaa muuqaalka ay indhuhu ku doogsadaan. Ugaadh ay ka mid yihiin sakaarada iyo deerada ayaanu jidka ku dhaafnay. Waxa kale oo kolba naga hor booda shimbiro ay ka mid yihiin xidin xiito, qoolay, yaryaro, bakayle iyo nooleyaal kale. Marka aanu maraynno meel geelu daaqayo waxa aanu dhimaynnay xawaaraha gaadhiga, si aanu didmada ugu jabin.
10:00 kii Subaxnimo iyo qadaro ayaanu gaadhay Xiingalool magaaladii Halganka iyo wadatashiga . judhiiba waxa la noo gelbiyey dhanka iyo Hoyga magaalada uu ka deganyahay Abdixakiin Dhoobo waxaa halkaa ku sii diyaar ahaa oo soo dhawaynta waftigayga diyaar u ahaa Cuqaal, Odayaal Dhalinyaro, Haween, iyo waxagardka reer Xiingalool nasasho ka dib waxaan iyaguna na soo gaadhay wafti milgo iyo miisaan leh oo kakala yimi Gobalka Bari iyoHighland waxaanu guda galnay ajandayaashaydii salaadii Duhur iyo qado ayaanu isla gaadhnay gudashada faralka iyo qadada ka dib waxaanu dib jilibka u laabanay isla Golihii waxaanu isla gaadhnay Salaadii Casar dib ayaa loo guda galay shaqadii 5:30 badhkii ayuu noo dhamaaday oo aanu natiijooyin wax ku oola ka gaadhnay .
Previous articleXusuus:- Maanta oo kale 10sano kahor waxaa Somalia ka dhacay Halaag aan wali maanka Shacabka ka Go’in.
Next articleAkhriso:- Xildhibaankii laga eryay Xisbiga Himilo Qaran oo dhaliil badan usoo jeediyay Hogaanka Xisbigaasi.